Yakazara Hondo: Zvigaro zvoumambo zveBritannia zvatova newarailer | Linux Vakapindwa muropa
Yakazara Hondo iri rakabudirira vhidhiyo mutambo saga yakagadziriswa nechikwata cheBritish Iyo Inogadzira Assembly. Iyo yese saga inosangana yekushanduka-based zano neicho chaicho-nguva kurwa matekiniki, uye yakanaka mifananidzo. Iyo ine yakanyanya kukwirira hunyanzvi hunhu, saka izvo zvinongedzo zvehardware zvakakwirira kwazvo kufambisa akadai asina kujairika ruzivo uye magiraidhi. Asi izvo zvinongova zvidiki zvidiki zvemutambo wayo unonakidza uye mepu yehunyanzvi uko kwaunogona kugadzira mauto uye wotanga kukunda nekukorobha maguta.
Kuwedzeredzwa kwakawanda kwesaga kwakatangwa uye ikozvino yave nguva ye Zvigaro zvoumambo zveBrannannia, kuvhurwa uko kukoshesa kuri paBritish Isles. Huye, ivo vanogadzira vari kushanda nesimba pane uyu mutsva mutambo uye zvishoma nezvishoma ivo vari kutitendera kuti tione zvimwe zveizvo zvichave chigadzirwa chekupedzisira chichava, ikozvino ivo vaburitsa ino turera yatinonamatira kwauri mune ino posvo. Chokwadi ndechekuti kuchiona kuchisiya kunzwa kwakanaka kwazvo, kunyanya kana tichiziva kuti nguva pfupi ichangoburitswa yeWindows ichauyawo neLinux. Munhu anotarisira kuitakura zvakare ndiye Feral InteractiveNdosaka iwe uchigona kuenda kuFeral Store kana iyo Steam chitoro kubva uko kwakagadziridzwa ruzivo paHondo Yese: Zvigaro zveBritannia zvinopihwa uye kubva kwaunogona kuzvitenga kana zvasvika. Saizvozvo, iwe unogona pre-kuitenga kubva ikozvino kuStam neFeral Chitoro isati yatanga, kuona kuti chiteshi chinowana mari yakakwana zvirinani kuzviita kubva kuFeral Store zvakananga, kunyangwe aya ari mafungiro ako uye iwe unogona kuita chero unoda.
Nenzira, mune iyo nyowani yepakati dingindira reBritish Isles, isu tichawanawo shanduko mumhando dzakasiyana dzevatambi idzo Hondo Yese inounza kwatiri, pamwe nenzira itsva kukunda kwete kwakavakirwa pakukunda, Asi zvakare mune mukurumbira, izvo zvaungade kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuvaka dhorobha rako zvakanyanya kupfuura iyo hondo pachayo mune iyi mhando yezano vhidhiyo mutambo. Mukukunda kwemukurumbira haufanire kukunda uye kurwisa mepu yese ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Yakazara Hondo: Zvigaro zvoumambo zveBritannia zvatove neturera nyowani